I-Chrome 72 ifika nomsebenzi wokubuka amavidiyo kumodi yesithombe-esithombeni nokuningi | Kusuka kuLinux
I-Chrome 72 ifika nomsebenzi wokubuka amavidiyo kumodi yesithombe-esithombeni nokuningi
I-Google isanda kukhipha inguqulo entsha ye-Chrome 72 Abasebenzisi bakho beselula nabadeskithophu kanye nesiphequluli sewebhu esibuyekeziwe siletha inqwaba yezithuthukisi zokuphepha kanye nezici ezintsha zonjiniyela.
Le nguqulo entsha ye I-Chrome 72 ithola imenyu yezilungiselelo, ukuthuthukiswa kwe-API yokufakazela ubuqiniso bewebhu, ukuvimba okuphelele kwezigelekeqe ngenkathi kulandwa amakhasi, nokuningi.
Ngaphezu kokuqanjwa okusha nokulungiswa kwamaphutha, Ukuba sengozini okungu-58 kulungisiwe kunguqulo entsha.
Ubungozi obuningi obukhonjwe ngamathuluzi wokuhlola azenzakalelayo i-AddressSanitizer, i-MemorySanitizer, i-Integrity Check Flow, i-LibFuzzer ne-AFL.
Enye yezingqinamba (i-CVE-2019-5754) imakwe njengebucayi, okusho ukuthi, ikuvumela ukuthi weqe wonke amazinga wokuvikelwa kwesiphequluli futhi usebenzise ikhodi kusistimu engaphandle kwemvelo ye-sandbox.
Lokhu kuba sengozini kungenxa yesiphazamisi ekusetshenzisweni kwephrothokholi ye-QUIC (imininingwane ayikanikezwa okwamanje).
Njengengxenye yohlelo lwemiklomelo yemali yokuthola ukuba sengozini kwenguqulo yamanje, iGoogle ikhokhele imiklomelo engama-34 ebiza u- $ 50.5 ayizinkulungwane (okukodwa kwe- $ 7,500 ne- $ 4,000, imiklomelo emibili ka- $ 5000, imiklomelo eyisithupha ka- $ 3000, imiklomelo emibili ka- $ 2000, imiklomelo emihlanu yama- $ 1000 namabhonasi amane ka- $ 500).
Izici ze-Chrome 72
Ukuqala nge-Chrome 72, amandla okulungisa i-Chromecast dongle ayasuswa ngesiphequluli sedeskithophu futhi esikhundleni salokho uqondise abasebenzisi kuhlelo lokusebenza le-Google Home le-Android ne-iOS.
Ngaphambilini, abasebenzisi bebengaya ku-chrome: // cast ukulungisa i-dongle yabo, kepha lelo khono lisusiwe.
Esinye isici esizogqamisa enguqulweni yedeskithophu yesiphequluli ukuthi Amandla wokubuka amavidiyo kokuqukethwe kwimodi yesithombe-esithombeni anikwe amandla ngokuzenzakalela, okukuvumela ukuthi uhlukanise ividiyo ngendlela yewindi elintantayo, elihlala libonakala lapho uzulazula kusiphequluli.
Ukubuka ividiyo ye-YouTube ngale ndlela, chofoza kabili kuvidiyo ngenkinobho yegundane bese ukhetha imodi "Yesithombe-Esithombeni".
Ukunqanyulwa kwevidiyo kusebenza kuphela uma usebenzisa i-Picture-in-Picture API esizeni, kumasayithi angahlelelwanga imodi entsha, a umphelelisi kwangaphandle.
Kule nguqulo entsha ye-Chrome 72 ukuvikelwa inikwe amandla ngokuzenzakalela ngokumelene nemizamo yokusebenzisa ikhodi yomuntu wesithathu ngaphakathi kwezinqubo ze-Chrome.
Okuhlukile kwenzelwa kuphela amakhodi nezinhlelo ezisayiniwe ngeMicrosoft zabantu abakhubazekile.
Ukufaka amakhodi afanayo kuyabonakala ku-2/3 wezinhlelo zeWindows futhi njengomthetho ojwayelekile kwenziwa ngokusebenzisa i-antivirus.
Ngokwezibalo, lezi zindlela zokukhohlisa ziholela ekwehleni kozinzo lomsebenzi futhi zibangele i-15% yakho konke ukwehluleka okubonakalayo kusiphequluli.
Esikhundleni sokubhala ngaphezulu ikhodi kuzinqubo eziqalisiwe, sebenzisa i- kugcwaliswa kanye ne-API imiyalezo yomdabu .
Lapho uvula amasayithi ane-TLS 1.0 / 1.1, manje sekukhonjiswa isexwayiso esikhethekile mayelana nokusebenzisa uhlobo olwehlisiwe lwe-TLS.
Ngephutha, hlela ukuthi Ukusekelwa kwe-TLS 1.0 / 1.1 kuphela ku-Chrome 81, elindelwe ngoJanuwari 2020, kepha izilungiselelo ezikuvumela ukuthi ubuyisele i-TLS 1.0 / 1.1 zizohlala kuze kube nguJanuwari 2021.
Imenyu yezilungiselelo ithola ukuxhaswa okuzenzakalelayo kwezigaba zayo, futhi kukhona nesinqamuleli esigabeni esithi People esivumela ukuthi uvule izilungiselelo ze-akhawunti ye-Google ngqo.
I-Chrome 72 futhi iletha ukuthuthuka ku-API yokufakazela ubuqiniso bewebhu kungqimba olungeziwe lokuphepha. Manje ivumela abasebenzisi ukungena ngemvume ngokhiye wokuphepha, okhiye be-Bluetooth U2F, noma ezinye izindlela zokuphepha.
I-Web Authentication API ingeza ukusekelwa kokufakazela ubuqiniso besayithi kusetshenziswa amathokheni nezinzwa zebhayometrikhi.
Ungayithola kanjani i-Google Chrome 72?
Okwawo wonke umuntu lapho Abasebenzisi balesi siphequluli sewebhu, kuzodingeka balinde isiphequluli sabo ukukhombisa isibuyekezo esikhona ukuze basenze.
Ngenkathi kulabo abanentshisekelo yokufaka lesi siphequluli kuzinhlelo zabo, bangavakashela i-lkuwebhusayithi esemthethweni yesiphequluli lapho ungathola khona amaphakheji wokufaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Chrome 72 ifika nomsebenzi wokubuka amavidiyo kumodi yesithombe-esithombeni nokuningi
Isoftware Emahhala futhi Evulekile: Umthelela Wezobuchwepheshe Ezinhlanganweni
I-Kodi 18 "Leia" ifika ngokusekelwa kwe-DRM, ama-emulators nokuningi